Fampandrosoana an’I Madagasikara : Naneho ny fahavononany ny Diaspora -
AccueilRaharaham-pirenenaFampandrosoana an’I Madagasikara : Naneho ny fahavononany ny Diaspora
Tratra ny tanjona. Mahatratra 400 ireo Malagasy mila ravinahitra any ivelany no tonga mandray anjara amin’ilay Fihaonamben’ny Diaspora tanterahina eto Madagasikara, etsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka, amin’izao fotoana izao. Noho izay indrindra, nanambara ny teo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny (MAE), mpikarakara ny hetsika, tamin’ny alalan’ny minisitra Henry Rabary-Njaka fa tratra ny tanjona tamin’ity Fihaonamben’ny Diaspora andiany voalohany ity satria efa nihoatra lavitra noho ny noeritreretina ny fahamaroan’ireo mpandray anjara.
Araka izany, hikaon-doha miaraka amin’ny Fitondram-panjakana mandritra ny hateloana ireo Malagasy avy any ivelany ireo ho amin’ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ny firenena. Noho izay indrindra, hohenoina ny hetahetan’ireo mpandray anjara, hohenoina ihany koa ny hevitr’izy ireo ao anatin’ny adihevitra mba hivoahan’ny tsoa-kevitra goavana hoenti-mampandroso an’i Madagasikara. Mazava fa lavitry ny adihevitra politika ity Fihaonamben’ny Diaspora Malagasy ity satria ny lohahevitra amin’ity andiany voalohany ity dia manambara tsara fa “Zanak’i Madagasikara, miara-mandrafitra ny ho avy iombonana”.
Nambaran’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Henry Rabary-Njaka, fa tanjona amin’ity Fihaonambe andiany voalohany ity ny hametrahana fototra ho amin’ny tetezana mampiray ny Malagasy rehetra, izay miparitaka manerana an’izao tontolo izao hitambatra mba hitondra ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana ny firenena. Marihina mantsy fa mpikamban’ny Diaspora teo aloha ny minisitry ny Raharaham-bahiny, ary mahatsapa fa ity Fihaonambe ity dia lalana iray ahafahana mametraka stratejika fampandrosoana ho an’ny firenena.
Noho izay indrindra, natsangana ny rafitra iray eo anivon’ny minisitera tantanany hisahana manokana ny Diaspora Malagasy.
Nanambara ity lehiben’ny diplaomasia malagasy ity fa faniriana ny hivoahan’ny tsoa-kevitra sy antontan-kevitra goavana amin’ity hetsika andiany voalohany ity, ary mba ahitam-bokany tsara izany ho amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Ny solontenan’ireo diaspora izay nandray anjara fitenenana kosa dia naneho ny fahavononany hitondra ny anjara biriky ho an’ny fampandrosoana an’I Madagasikara.